सरकार र केसी पक्षबीच सात बुँदे सहमति | My News Nepal
सरकार र केसी पक्षबीच सात बुँदे सहमति
काठमाडौं । २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकार पक्षबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। स्रोतका अनुसार अहिले केहीबेरमा सरकारी वार्ता टोली र डा केसी पक्षबीच सिंहदरबारमा हुने वार्तामा हस्ताक्षर गरिने भएको छ। डा केसीको १५ औं अनशनको २७ औं दिनमा सहमति भएको हो। डा. केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यहरु सहमतिका विषयमा जानकारी गराउन शिक्षण अस्पताल गएका छन्।
त्यसलाई केसीले स्वीकारेको खण्डमा आजै उनले अनसन तोड्ने पनि जनाइएको छ ।
डा केसीलार्इ काठमाडौं ल्याइसकेपछि पाँचौं दिनमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा बनेको वार्ताको वातावरण अनरुप मंगलबार दुवै पक्षबीचको संवाहिनता तोडिएको थियो। मंगलबार साँझ बसेको वार्तामा छ वटा बुँदामा सहमति नजिक पुगेको बताए पनि बुधबारको वार्ता भने सफल हुन सकेन।
बुधबारको वार्तामा सरकारी पक्षले छलकपट गरेको भन्दै केसी पक्षका वार्ताकारहरुले वार्ता छाडेका थिए। उनीहरुले बिज्ञप्ति जारी गरेर सरकार संवेदनहिन बनेकोसमेत आरोप लगाएका थिए।वार्तामा भएका सहमति भएका बुँदा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएपछि डा केसीले आजै अनशन तोड्ने जनाइएको छ। सहमति भएका विषयहरु भने बाहिर आएका छैनन् ।
यसअघि डा. केसी जुम्लामा रहँदै पनि तीनपटक वार्ता भएको थियो । तर, त्यो वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि डा केसी पक्षले सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि म्यान्डेट नभएको भन्दै डा. केसी पक्षधरले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।
सरकारी वार्ता टोलीमा संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललगायत तीन जना छन् भने डा. केसी पक्षका संयोजक डा. अभिषेक सिंह, डा. जीवन क्षेत्रीलगायत पाँच जना वार्तामा संलग्न छन्।